दरिद्रता : दस प्रकरण- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
दरिद्रता : दस प्रकरण
जेष्ठ २८, २०७९ विनोदविक्रम केसी
यति दरिद्र पनि के हुनु ?
एकदुई तोला लज्जा पनि नहोस् आफूसँग
तीनचार मासा इमान पनि नहोस् आफूसँग
पााच–छ लाल निश्छलता पनि नहोस् आफूसँग
यति दरिद्र हुने छुट कसैलाई छैन ।
म यता रोटीको पहाडको फेदीमै छु
उनीहरु उता फोर्ब्सको चुली चढिसकेछन्
लोकसेवा परीक्षार्थीहरु हो !
रट्नुपर्ने कुरा अर्कै छ—
को हो यो दुनियाँको सबैभन्दा नृशंस अर्बपति ?
जो अर्बौं मान्छेको दरिद्रतामाथि उभिएको छ ।
तिमी मलाई कहिले कोटसँग जोख्छौ
मलाई नजोखी तिमी यत्तिकै
आत्मसात् गर्नै सक्दैनौ
ए आँखामा ढक–तराजु बोकेर हिँड्ने मान्छे !
मलाई तिम्रो दरिद्रताप्रति खेद छ ।
बगलीमा एक कप चिया खाने औकात नहुनु
अथवा, एउटा चुरोट फुक्ने बर्कत नहुनु
दरिद्रताको आभास छैन
तर, फन्किएर हिँड्ने एउटा साथीले
मलाई संसारकै दरिद्र बनाइदिन्छ ।
यो देश के सारो दरिद्र भाको !
प्रेमिका र प्रेमीहरुलाई दिनका निम्ति
योसाग चक्कुको धारसिबाय केही छैन
यो देश हो कि
चक्कुको उपनिवेश ?
मेरो प्रेम बाँसुरी हो
धुनमा निमग्न हुन नसक्ने दरिद्रता नत्यागेसम्म
यो देश मेरो प्रेमको लायक हुन सक्दैन ।
कमरेडलाई अचेल रातो मन पर्दैन
खैरो मन पर्छ
उहाँले भर्खरै घरमा खैरो रङ लगाउनुभएको छ
हालसालै किनेको नयाँ गाडी पनि खैरै छ
सुट पनि खैरो लगाउनुहुन्छ
रातोसँग टुटिसकेको छ मोह
यो दरिद्रहरुको रङ हो— उहाालाई तत्त्वबोध भइसक्यो
उहाँको विचार पनि खैरो भइसकेको छ
बस्, रातोबाट फिक्किादै फिक्किँदै जानुको
दरिद्रताको उहाँलाई हेक्का छैन ।
दरिद्रताको पाराकाष्ठा हो यो
मान्छेहरुसँग मुटु बाँकी छैन
साटासाट हुन्छ प्रेम
प्रेमसँग न धड्कन बाँकी रहन्छ, न रगत
यति दरिद्र हालतमा प्रेमलाई भेट्नु
पृथ्वीको अन्तिम त्रासदी हो ।
‘जि’ देखि ‘गी’ सम्म
जिन्दगी सर्वत्र अभावग्रस्त किन नहोस्
लत्रेर–झुकेर बाँच्ने एउटा मृत्युबाहेक
जतिवटा गरिबी पनि धारण गर्न सक्छु म ।
सारा प्रयत्न यही हुनुपर्छ, कि—
दरिद्रता लोप भइजाओस्
तर, यो सारा प्रक्रियामा
मान्छे विलुप्त भएर
कुनै खुङ्खार प्राणीको
जन्म हुनु हुँदैन ।
म त के थिएँ र ?
दरिद्रताको पिँजडामा बन्दी
पन्छी न थिएँ
बन्धनको तार ठुङ्दाठुङ्दा जीवन रगतपच्छे थियो
र, एक दिन
तिमीले मलाई तिम्रा आँखाहरुको आगालोमा
यसरी बाँधिदियौ, कि—
म मुक्त भएँ
सिङ्गै आकाश मेरो भयो ।
प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७९ ०८:१६